परपुरुष संग लागेको भन्दै श्रीमतीको निर्मम हत्या ,छोरी निशा भन्छिन,आमाले हात जोडेपनि बुबाले हानिरहे – PathivaraOnline
Home > समाचार > परपुरुष संग लागेको भन्दै श्रीमतीको निर्मम हत्या ,छोरी निशा भन्छिन,आमाले हात जोडेपनि बुबाले हानिरहे
admin January 4, 2019 समाचार	1
खाना खाइसकेपछि टिभी हेर्दै निदाएकी निशाले मध्यराति चट्याङ परेजस्तो आवाज सुनिन्। निन्द्राबाट उठ्दा उनीकी आमा रोइरहेकी थिइन्। कोखाबाट रगत बगिरहेको देखेपछि १२ वर्षीया निशाको होस् उड्यो। उनले आमालाई छुन नपाउँदै अर्को आवाज आयो र उनकी आमा ओझ्यानबाट तल ढलिन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
घटना बिहीबार मध्यरातको हो। बाँकेको डडुवा गाउँपालिका-३ वनकट्टिीकाकी १२ वर्षीया निशा वर्माले आफ्नी २८ वर्षीया आमा शान्तिदेवी वर्माको हत्या आफ्नै आँखा अगाडि देखिन्। उनकी आमाले दुई हात जोडेर नमार्न अनुरोध गरिरहेकी थिइन्। तर, निर्दयी सञ्जयले पत्नीको चित्कार नै नसुनी दोस्रो पटक बन्दुक लोड गरे र पत्नीमाथि प्रहार गरे।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ३० वर्षीय सञ्जयकुमारले आफ्नी पत्नी परपुरुषसँग सम्बन्धमा रहेकाले आफूले सहन नसकी गोली हानेको स्वीकारेका छन्। उनले आफू डिप्रेशनको बिरामी भए पनि पटक-पटकको आग्रहमा पत्नीले नमान्दा अन्त्यमा रिसले सहन गर्न नसकेर गोली हानेको बताएको प्रहरीले जनाएको छ। इसेन्ससहितको हतियार नियन्त्रणमा लिन छिमेकीले बारम्बार प्रहरीलाई अनुरोध गरेपनि सञ्जयले आफूलाई असुरक्षा भएको भन्दै बन्दुक प्रहरीलाई बुझाएका थिएनन्। तस्बिर गुगुल बाट
यो कस्तो देखियो नेपालमा? सालकाे रूखबाट यसरी पानीकाे धारा बग्न थालेपछि… भिडियोमै हेर्नुहाेस
फेरि आज पनि थपियो यति धेरै कोरोना संक्रमित!
One thought on “परपुरुष संग लागेको भन्दै श्रीमतीको निर्मम हत्या ,छोरी निशा भन्छिन,आमाले हात जोडेपनि बुबाले हानिरहे”
We should be good at handling this each and every since we becomeainvolving practice.
She has bachelor degrees in Law and Performing Arts and decided to become her own boss with the
first day’s 2007.